Translate Myanmar (Burmese) to Zulu | Multilang.space
translate Myanmar (Burmese) to Zulu, Myanmar (Burmese) to Zulu translations, Myanmar (Burmese) to Zulu Google Translate ,
မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား Sawubona Unjani
မည်သူမဆိုရှိပါသလား? Ingabe ukhona?
ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ Ngiyakuthanda kakhulu kakhulu
ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ, Kubiza malini le hamburger?
သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား? Ungangishayela itekisi?
အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ Indiza yami ibambezelekile
ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို Ngilapha ngebhizinisi
မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည် Sanibonani igama lami ngingu
ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို Ngiyaxolisa, kodwa ngishadile
ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ် Ngingathanda ukukubuza
သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား? Ungangithatha esikhumulweni sezindiza?
ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ Yisiphi isikhathi okwamanje, sicela?
အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ? Sikuphi isiteshi samaphoyisa?
ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား? Ngingakwazi yini ukuboleka ishaja yakho yefoni sicela?
ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ? Ngicela ungilandise isiphuzo, sicela?
ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ? Kubiza malini?
ငါ gluten မှမတည့်ဘူး Ngine-allergenki ku-gluten
ဆရာဝန်ခေါ်ပါ Shayela udokotela ucingo
ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော Ingabe kukhona udokotela?
ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား? Ngingakwazi ukushaya ucingo?
ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။ Ngibize umphathi wakho sicela.
ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည် Le ndawo inhle kakhulu
ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ Thatha nami ehhotela sicela
အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ? Iyini inombolo yami ekamelweni?